Grinder ahitra 4
Anaran'ny vokatra: grinder ahitra 4-ampahany
Fitaovana: Aluminium T6061
Famaranana ety ivelany: loko manodinkodina
Mpitrandraka ahitra 4-ampahany, vita amin'ny Aluminium T-6061, izay fitaovana varingarina misy fizarana 4 izay misaraka ary manana nify na fantsika mifanaraka amin'ny fomba iray ka rehefa avadika ny tapany ambony dia simba ny fitaovana ao anatiny. Ny tapany faha-3 dia voaangona vitsivitsy notetehina tao amin'ny efi-trano ambany ary sivana ny kief. Ny tapany faha-4 dia angonina ny kief ..
Ahoana ny fampiasana azy:
Dingana 1: esory ny fonony ambony. Ampiasao ny rantsan-tànanao mba hanaparitahana ireo tsimoka lehibe kokoa ary hametrahana azy eo anelanelan'ny nifin'ny makarakara. Aza manahirana mametraka ny tsimoka eo afovoany mivantana – io no isan'ny pivots andriamby, ka tsy hisy ho simbaina na inona na inona eo afovoany.
Dingana 2: soloina ny tampon'ny grinder ary omeo manodidina ny 10 fihodinana, mandra-pahatongan'ny fararano rehetra nianjera tamin'ny lavaka. Azonao esorina ny tampony ary apetaho amin'ny sisin'ny makarakara io mba hanampiana anao hamaha ireo singa miraikitra ao nify.
Dingana 3: esory amin'ny nify ny efi-trano mba hahitanao ny sosona harona mitazona rongony vao miharo anao. Ampidiro ao anaty fantsom-pirazanao, na iombonanao, na ampidiro ary ankafizo!
Dingana 4: Raha vantany vao nanangona kief tao amin'ny efi-trano ambany ianao, dia esory amin'ny sombin-taratasy na ny fitaovana fikosehana (tsy ny fividianana solika rehetra akory no ahitana iray, fa mora azo antoka). Averina indray, azonao atao ny mamafy kief amin'ny lovia mba ho matanjaka kokoa, na hitahiry azy amin'ny zavatra hafa. Mitandrema amin'ny famafazana vy, satria afaka mamoritra tsiranoka aliminioma miaraka amin'ny kiefo ianao!
- Adidy mavesatra an-tampon'ny adidy mavesatra mandritra ny taona maro.
- Sivana efijery 500 micron / midina amin'ny efitrano ambany (misy spatula kely hanangonana anao).
- Mora mikosoka ny zava-manitra / ahitra / tsofinao mora foana nefa tsy mamela sakany lehibe - Na dia ny zava-maniry vaovao / mando aza.
- Mikatona mafy miaraka amin'ireo andriamby neodymium mahery ny rakotra andriamby matanjaka, amin'izay ianao afaka mampiasa ity grinder ity ho fitahirizana ahitra.
- Ny famaranana Elegant Gun Metal dia mahatohitra mafy ary manampy anao HAMONJY NY VOLA SY NY VOLA - Aza dia ampiasaina amin'ny valiny mitovy amin'izany.
Teo aloha: Grinder bozaka miaraka amina Logo Logo
Manaraka: mpitresina ahitra alimo
Grinder bozaka ahitra
Grinder Grosir Herb